शाेकमा डलर देख्ने युट्युबर
Monday,30 March, 2020 | सोमबार, १७ चैत, २०७६
एन कुँवर काठमाडाैं, २७ माघ
सोमबार पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी पत्नी मुना कार्की गम्भीर घाइते र घरमा काम गर्ने दाङका विजय चौधरी मृत अवस्थामा भेटिए । मुनालाई चोटसहित गम्भीर घाइते भएको अवस्थामा अस्पताल पुर्‍याइएको थियो भने विजय झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिए । पछि अस्पतालमै मुनाको मृत्यु भयो ।
यो घटनापछि मृतक मुना र विजयका परिवार शोकमा छन् । वास्तविकता पत्ता लगाउन प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
तर, केही युट्युबरले यसलाई ‘डलर तान्ने मेसो’ बनाएका छन् । भन्नेले भन्लान्, ‘सिसाको घरमा बसेर अरुलाई ढुंगा हान्दैछस्’ । तैपनि, युट्युबतिर आएका हेडलाइन पढेपछि चुप लागेर बस्न मनले मानेन । फेरि, यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत विचार वा टिप्पणी हो ।
संवेदनशील घटनालाई सनसनीपूर्ण बनाउनु युट्युबरका लागि आमकुरा भइसकेको छ । टेलिभिजनकर्मी रवि लामिछाने आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा पक्राउ पर्दा यसैगरी कतिपय युट्युबरले आतंक मच्चाएका थिए, ‘रवि लामिछाने जेलभित्र यस्तो अवस्थामा’ ‘हिरासतबाट रविले मुख खोले’ ‘प्रहरीले फेला पार्यो यस्तो सनसनीपूर्ण प्रमाण, अब के हुन्छ ?’ ‘पुडासैनी प्रकरण यसरी भएको हो, रविलाई यसकारण फसाइयो’ ‘हुने भो शालिकरामको भिडियोभित्रको रहस्य, हुने भो सबै खुलासा’ । यसबारे त्यतिबेला लेखेको एउटा ब्लगलाई लिएर कतिपय युट्युबरले लेखकलाई गाली पनि गरे । मलाई लाग्छ, आज जे लेख्दैछु, त्यसमा पनि गाली त अवस्य गर्नेछन् ।
स्पष्ट पारिहालौँ, नेपालमा व्यवसायिक ढंगले अघि बढेका युट्युबर पनि छन् । आलोचना उनीहरूको होइन । चित्त दुखाई उनीहरूबाट हो, जसले कसैका दुःखलाई डलर तान्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
पूर्वसचिव कार्कीकी पत्नी मुना र उनको घरमा काम गर्ने विजयको मृत्युबारे ’सेन्सेसनल हेड्लाइन्स’ युट्युबमा छ्यापछ्याप्ती भेटिन थालेको छ । ती हेडलाइनमा राखिएका तस्वीरको त कुरै नगरौं ।
केही हेडलाइन हेरौं :
‘पूर्वसचिव प’त्नी ह’त्या प्रकरण : सी’सी’टी’भी फु’टेज बाहि’रियो, मुना कार्कीको ह’त्या’रा चिन्नुहोस्’, ‘कामदारले गर्‍यो मुना कार्कीको हत्या, सीसीटीभीमा यस्तो देखियो’, ‘काठमाडौंमा दिउँसै पुर्व सचिव पत्नी र कामदारको हत्या, कसरी भयो यस्तो छिमेकी यसो भन्छन्’, ‘पूर्वसचिवकी श्रीमतीलाई यसरी हत्या गरेको रहेछ देखियो यस्तो फुटेज’, ‘ललितपुरमा मुना कार्कीको आफ्नै कामदारबाट हत्या, यसो भन्छन् छिमेकी’, ‘पूर्वसचिवकी पत्नी मुनाको कामदारले लियो ज्यान, कारण यस्तो’, ‘भेटियो सीसीटीभी फुटेज, कामदारले नै गरे पूर्वसचिव पत्नी मुना कार्कीको विभत्स हत्या, कारण यस्तो’ ।
हेडलाइन पढ्दा लाग्छ, हत्यारा पत्ता लागिसक्यो, प्रहरीले सीसीटिभी फुटेज युट्युबरलाई दिइसक्यो । तर, वास्तवमा हेडलाइनमा मात्रै हुन्छ सीसीटिभी फुटेज, भित्र केही हुँदैन ।
प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ तर युट्युबरले ‘फैसला’ गरिसकेका छन्, हत्यारा को हो, कसरी हत्या गर्‍यो, के कारणले गर्‍यो ?
मृत्यु वा हत्याजस्तो घटनामा रिपोर्टिङ गर्न क्यामेरा र माइक बोकेर गएपछि सर्वसाधरणलाई सही सूचना दिने हो, न कि व्यापारका लागि सेन्सेसनल हेड्लाइन राखेर घटना र विषयलाई तोडमोड गर्ने ।
यस्ता शीर्षक राखेर युट्युबरले दर्शक र डलर त बटुलेका छन् तर मिडियाको मर्म र कुनै मुद्दाको संवेदनशीलतालाई पनि त्यसैगरी लत्याएका छन् । घतलाग्दो कुरा यो छ कि यस्तै हेडलाइनसहितका भिडियो धेरैले सेयर गर्छन् । पत्याएरै त गरेका होलान् !
युट्युब हेरेर धारणा बनाउने धेरै छन् यहाँ । त्यसैले युट्युबरले राखेका सामाग्री अर्थपूर्ण हुनुपर्छ । तर, हामीकहाँ खै यस्तो ?
युट्युबरले यस्तो चर्को हेड्लाइन राख्नुको मुख्य कारण नै डलर हो । देश तथा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई नेपालको समसामयिक घटनाबारे स्वाभाविक रुपमा बढी चासो हुन्छ । यसबारे थाहा पाउन उनीहरु युट्युब र डिजिटल मिडियाको साहारा लिन्छन् ।
युट्युब च्यानलहरुको तार्गेट खासगरी विदेशमा बस्ने नेपाली हुन् । किनकि, नेपालमा खोलिएका युट्युब च्यानलले पाउने पैसा नेपालभन्दा बाहिरका देशबाट आउने ‘भ्युज’ का आधारमा बढी हुन्छ ।
विशेषगरी मलेसिया, दुबई, कतार, साउदीलगायतका खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीले युट्युब च्यानल बढी हेर्ने गरेका छन् । युरोप तथा अमेरिकाबाट हेरियो भने अझ धेरै रोयल्टी आउने गरेको छ ।
यसरी भ्यूजका आधारमा मात्र भन्दा पनि देशबाहिरबाट कतिले भिडियो हेरे भन्ने आधारमा युट्युवरलाई पैसा आउँछ । मोनिटाइज भएपछिको सम्झौताका आधारमा ‘वेस्र्टन युनियन मनी ट्रान्सफर’बाट उनीहरुले पैसा लिने गरेका छन् ।
त्यसैले जतिसुकै संवेदनशील घटनामा पनि ‘सिरिअल इपिसोड’ हान्न पछि पर्दैनन्, कतिपय युट्युबर । के यस्ताे प्रवृत्तिले हाम्राे समाजलाई सही दिशातिर लैजान्छ ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २७, २०७६, ०८:११:००
अभाव र अनिकालबाट कोही नमरून् सरकार !
भोकले लैजाला कि रोगले ?
एन कुँवर @kunwar_nawaraj
कोरोना भाइरसबारे नेपालीले जान्नुपर्ने आठ तथ्य
सञ्चारमन्त्रीलाई 'घूस' प्रस्ताव गर्ने विजय मिश्र पनि कारबाहीको भागीदार
महरा सर, रोशनीलाई ‘मोहरा’ बनाउने को थियो ?
जोसेफ स्टालिन : हिरो पनि भिलेन पनि !
संसार हल्लाएको त्यो क्रान्ति र लेनिनवाद
विदेह नगरपालिकामा ५० वेडको क्वारेन्टाईन
लकडाउन छल्दै घर हिँडेका दुर्घटनामा परे, ७० हजार नभएर अस्पतालमै अलपत्र
कोरोना कोषमा बद्री पंगेनीको ५० हजार
नगर क्षेत्रमा डेरा बस्रनेलाई चन्द्रागिरी नगरपालिकाले घर पुर्‍याइदिने
३ दिनमा ८८ हजार सिलिण्डर ग्यास बिक्री
विदेशबाट आएका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण आशंकामा प्रदेश २ ले थाल्याे तथ्यांक संकलन
सर्वदलीय विपद् कोषबाट भरतपुर अस्पताललाई ५० सेट पीपीई
लकडाउनको नाममा सशस्त्रको ज्यादती, औषधि किनेर फर्केका २ युवामाथि कुटपिट
यी सवारी साधन चल्नेछन्, उच्चस्तरीय समितिका १२ निर्णय
तेस्रो संक्रमित भेटिएपछि रणनीति बदल्दै सरकार
डब्लुएचओको चेतावनी– हिँडडुल नियन्त्रणमा मात्र भर नपरौं
आइसोलेसनमा मृत्यु भएका युवकबारे अस्पतालले निकाल्यो विज्ञप्ति
कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएकी नर्सले यस्तो ‘सुसाइड नोट’ लेखेर गरिन् आत्महत्या
कोरोनासँग लड्न के खाने ? यी खानेकुराले बढाउँछ इम्युनिटी पावर
लकडाउनपछि यस्तो देखिँदै छ उपत्यका